विजय शाहीले कसरी उल्लु बनाउदै आएका रहेछन भनेर पुण्य गौतमसंग विजयकै जस्तो डेमो देखाउन आए अर्का युवक ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
August 2, 2021 AdminLeaveaComment on विजय शाहीले कसरी उल्लु बनाउदै आएका रहेछन भनेर पुण्य गौतमसंग विजयकै जस्तो डेमो देखाउन आए अर्का युवक ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौँ, १८ श्रावन । अमेरिकी मेमरी एथलेट नेल्सन डेलिसले अन्तत विजय शाहीको असली रुप पहिचान गरेका छन । नेल्सन आफै चार पटक अमेरिकन मेमरी च्याम्पियन समेत हुन् । केहि समय अगाडी विश्वको सर्बोच्च शिखर सगरमाथा चढ्न नेपाल आएको बेला विजय शाहीको अनुरोध स्वीकारेर उनलाई भेटेपछि विजय शाही सहि हो जस्तो पाराको भिडियो बनाएर आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेपछि उनको उक्त भिडियो नेपाली माझ निक्कै चर्चामा आएको थियो ।
विजय शाहीसंगको अन्तर्वार्ता भनेर नेल्सनले सार्बजनिक गरेको उक्त भिडियोको धेरै नेपाली युट्युबरहरुले रियाक्सन भिडियो पनि बनाएका थिए । त्यस्तै नेल्सनले युट्युबमा राखेको विजय शाहीको भिडियो मुनि हजारौ नेपालीहरुले प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए । भिडियो अपलोड गर्दा सम्म विजय शाहीमा सामान्य प्रतिभा त छ कि जस्तो सम्झेर नेल्सनले युट्युबमा राखे पनि त्यस मुनि आएको प्रतिक्रियाले नेल्सनको आखा खोलीदिएको थियो ।
गायिका विष्णु माझी किन कसैलाई मुख देखाउँदिनन्, एउटा मात्र फोटो किन पाइन्छ खुल्यो रहस्य ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)